उज्वल थापाको निधन: को हुन् उनी ? के पाठ सिक्ने? - समय-समाचार
थापालाई न ब्यानरपछाडि देखिने लालसा,न क्यामेरालाई दाँत देखाउने आतुरता नै थियो । थापा एक 'निस्पृह,शान्त र माैन' लाग्थ्यो । 'पद पाएपछि मरे नछाड्ने कुसंस्कृतिलाई गिज्याउँदै' थापाले विना प्रचारवाजी पद सुम्पिएका थिए ।
समय-समाचार मंगलबार, २०७८ जेठ १८ गते, १७:३१ मा प्रकाशित
राजनीतिक अभियानकर्मी तथा विवेकशील नेपाली पार्टीका संस्थापक चौवालीस वर्षीय उज्वल थापाको निधन भएको छ । थापाको मंगलबार अपराह्न ४:२५ बजे उपचारका क्रममा निधन भएको साझा विवेकशीलका संयोजक मिलन पाण्डेले जानकारी दिए । कोभिड-१९ भएपछि जेठ महिनाको सुरुमा अस्पतालमा भर्ना भएका उनको पछिल्लो अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको थियो । उनी भेन्टिलेटर र इक्मो प्रविधिबाट मेडीसिटि अस्पतालमा उपचारार्थ थिए । थापाको अध्यक्षतामा सन् २०१३ मा विवेकशील नेपाली पार्टी स्थापना भएको थियो । उनले सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा उक्त जिम्मेवारी छाडेका थिए ।
उनी एक इमान्दार र कुसल राजनीतिक अभियानकर्मीको रुपमा चिनिएका थिए । अहिलेका विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे थापाको प्रसंसा गर्दै भन्छन, ‘उज्वल दाइले मलाई आफ्नै पार्टिको अध्यक्षको जस्तो महसुस गराउनुहुन्थ्यो । ‘ युवाबर्गलाई इमान्दार राजनीति गर्न सिकाउने र सहि मार्गनिर्देशन दिने एक विवेकशील राजनीतिक अभियानकर्मीको रुपमा उनि चिनिएका थिए ।
उनको उपचारको लागि भनेर स्वतःस्फूर्त रूपमा देशविदेशबाट आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोगको जुटेको थियो । जव उनको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गयो र अत्याधुनिक प्रविधिबाट उपचार गराउनुपर्ने अवस्था देखियो त्यसपछि उनको परिवारको सहमतिमा आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियान चलाइएको थियो । त्यहि क्रममा १ दिन भित्रमै “गो फन्ड मी” मार्फत् २२,२९१ डलर र नेपाली ब्याङ्कको खातामा झन्डै २६.५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग सङ्कलन भएको थापा सहयोगीहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । एक जना साधारण मानिसको लागि एकैदिनमा त्यो रकम उठ्नु कम अर्थपूर्ण थिएन ।
त्यसैलाई लिएर अहिलेका विवेकशिल-साझा पार्टीका रबिन्द्र मिश्रले एउटा स्ट्याटस पनि ट्विट गर्दै भनेका थिए, “यति धेरै माया र समर्थन उज्वल थापाले लडेको दुईवटा राष्ट्रिय चुनावमा पनि पाएका भए उनको सोच र प्रतिबद्दताले ठूलो फड्को मारिसकेको हुने थियो । ढिलो आएको चेतना कहिलेकाहीं ‘शिक्षा’ होइन ‘पश्चाताप’मा सिमित हुन्छ”।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका अनुसार थापा ‘एक असल र भलाद्मी’ हुन् । चैतन्य मिश्रका अनुसार थापाले व्यक्तिगत गुण र सामाजिक कार्यकर्ताको छवि बनाएका थिए ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार थापा लाभको पदमा नपुगेका तर उदयीमान र स्वच्छ नेताको छवि बनाएका व्यक्ति थिए । समाजका मानिसहरु अझै पनि इमान्दार छन्, तर राजनीतिमा बेइमानी बढेको राय पोखरेलको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नीति अर्याल खनाल भने ‘थापा देशका अरू राजनीतिज्ञका भिडमा एक खालको ‘अपवाद’ भएको बताउँछिन् । खनालले बिबिसीले छापेको एक समाचारमा उज्वल थापालाई लिएर भनेकी थिइन्, “उज्ज्वल थापाहरूको ‘नेपाल खुल्लै छ’ भन्ने अभियानले राजनीतिक कारणले आयोजना गरिने बन्दका कारण उत्पन्न निराशाको वातावरणविरुद्ध आवाज उठायो । त्यस्तै महिला हिंसाविरुद्ध बालुवाटारमा अघि बढाइएको अभियानमा पनि उहाँहरू सक्रिय भएर लाग्नुभयो र युवाहरूलाई परिचालन गरेर वैकल्पिक राजनीतिक धार स्थापना गर्न उहाँहरू सक्रिय हुनुभयो ।”
संचारकर्मी समा थापा लेख्छिन, ‘उज्वल थापासँग मेरो प्रतक्ष्य भेट भएको छैन, म्यासेजमा कुराकानी हुँदा उहाँमा केही गर्ने हुटहुटी सधैं पाउँथे।’ त्यसैगरी नेकपा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री उज्वल थापालाई सम्बोधन गर्दै लेख्छिन, ‘नेपाली राजनितीमा एउटा फरक आयाम भित्राउन कोसिस गर्ने तपाई, स्वपनाजीवि युवा हो, लाखौ युवाको आईकन हो।’
सेतो पाटीका सम्पादक अमित ढकाललाई उज्ज्वल थापा ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्छु भनेर राजनीतिमा लागेको कहिल्यै भान भएन।’ उनका अनुसार थापा सरल र सौम्य स्वभावका थिए, थापा राजनीति संग्लिनुपर्छ भनेर दृढ उभिएका थिए । उनले धेरै युवालाई प्रेरणा दिए। उनको इमान र सरलताले धेरैको मन जित्यो।
लेखक खगेन्द्र संग्रौलासँग उज्ज्वल थापा बृहत् नागरिक आन्दाेलनकाे जुलुसमा भेटिएका थिए । संग्रौलाका अनुसार थापालाई न ब्यानरपछाडि देखिने लालसा,न क्यामेरालाई दाँत देखाउने आतुरता नै थियो । थापा एक ‘निस्पृह,शान्त र माैन’ लाग्थ्यो । ‘पद पाएपछि मरे नछाड्ने कुसंस्कृतिलाई गिज्याउँदै’ थापाले विना प्रचारवाजी पद सुम्पिएका थिए । यस्ता असल मानिस बाँचेकाे भए राम्रो हुने थियो ।
सामाजिक कार्य गरेर उठ्ने लक्ष्य विवेकशील दलको थियो र त्यसको नेतृत्व उज्वल थापाले गरेका थिए । विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गरेर आएका र जनताले विश्वास गरेका नेताहरू विभिन्न किसिमका राजनीतिक खिचातानी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा , त्यसको बिकल्पमा जन्माईएको थियो विवेकशील पार्टी थापाकै अधक्ष्यतामा । अब उज्वल थापाहरु जस्ता युवाहरुको खाँचो छ यो देशमा, देश परिवर्तनको लागि । अव आउने युवा पिंढीहरुले पनि उज्वल थापाको बाटोलाई पहिल्याउनु छ र यो देशलाई सहि दिशातिर लिएर जानुछ ।